Shiinaha shinida modified line-soo-saarka xuub biyuhu - Shiinaha Xinle Hongtai biyaha
Asphalt qalabka xuub xireyaashaba
Shiinaha shinida modified line-soo-saarka xuub biyuhu
Ka dib-iibka Service Bixiso: Injineerro la heli karo si mishiino adeega dibada
Magaca Product: SBS / APP laami xuub biyuhu
Danab: 380v / 50HZ
Capacity: 3000-15000square meter / maalintii
Damaanad: 12 Months
Workshop Main: 90 * 12 * 8m
Hawada tilmaantay Tifaftirayaasha: 0.7Mpa, 0.6M3 / min
Sida laga soo xigtay shuruudaha aad
90 maalmood dul qaata deposit
Wax kabadal xuub shinida xireyaashaba waxaa si balaadhan looga isticmaalo dhismayaasha warshadaha iyo sokeeye, sida saqafka, dhulka hoostiisa, musqusha, buundada, park, berkeda dabaasha, tunnel waayo biyuhu iyo moistureprof. Shinida waa hydrocarbon ah oo loo abuuray si dabiici ah ka saliidda cayriin. Waa dukaan carbon waxtar leh oo aanu dhalin gaasas lagu koriyo. Sidaa darteed xuub waa hab joogto ah u kaydiyo carbon on oogada Dhulka.
mabda 'ka shaqeeya
Mabda'a oo dhan ka shaqeeya waxa loo qaybin karaa 3 tallaabo.
1. Si loo qaso shinida, budada caag, bootar, saliid enginee iyo qaar ka mid ah qalabka kale ee cayriin via isku qasin taangiyada (taangiga qodan waa in lagu hayaa diiran by saliidda tabinta) .Waxaa isku dhamaystirtay la odhan karaa waa isku bituminous.
2. The isku bituminous la deliveryed doonaa daahan pools.Then wax salka (xoojinta) la mariyaa doonaa mixtures.At ku bituminous ee la soo dhaafay, xoojinta dahaarka lagu daboolay by film PE ama ciid ama kale materials.At wakhtigaas, ka xuub shinida hordhac ah la xirrira.
3. The alaabta dhamaystirtay la qaboojiyey doona biyaha iyo hawada, ka dibna la soo giringiriyey by autowinder.
beegyada uu Technical
Xirxirida: qayb kasta waxaa si taxadar leh ka buuxaan si looga fogaado in waxyeello inta lagu guda jiro gaadiidka.
Shipping: dekedda Tianjin
Q1: Ha aad isticmaasho bixiye gaar ah alaabta ceeriin?
Haa, waxaan ku siin karaa alaabta ceeriin kuu, si kastaba ha ahaatee, macaamiisheena ka iibsan kartaa qalabka wan in ay suuqa.
Q2: Muddo intee le'eg nolosha shaqada ee mashiinka waa?
Nolosha shaqada waa ka badan 15 sano oo damaanad ah waa 1 sano.
Q3: Waa maxay adeegga farsamada aad?
Waxaan injineerada our warshad macaamiisha ee soo diri doonaa si ay ula qabsadaan mashiinada ilaa aannu
macaamiisha ugu shaqeyn karaan.
Q4: aad Hayso qaar ka mid ah videos halkaas oo aanu arki kartaa khadka soo saara?
Haa, waxaan ku siin kara qaar ka mid ah videos samaynta macaamiisheena ku faraxsanahay.
Previous: Is-koolo xireyaashaba laami Waxyaabaha Sheet derbiga biyuhu
: Next Popular Design for China P1.5mm Front Service Indoor Fine Pitch LED Display Screen
APP kabadal shinida xireyaashaba
Asphalt xireyaashaba Dahaarka Qalabka
shinida Dahaarka keena Line
shinida xuub Production Line Waayo Floor
SBS kabadal Bituminous Bridge xireyaashaba
biyaha Dahaarka Production Line
Waterstop Dahaarka Production Line
1.5-5mm APP shinida biyuhu membra / waterstop ...
SBS kabadal Bituminous Bridge xireyaashaba / wa ...
4mm 3mm SBS Sheet xireyaashaba bituminous Mate ...
Sheet xireyaashaba Dahaarka Waxyaabaha / waterstop ...
Debecsan wax laga beddelay Asphalt Polyester Mat Waterpr ...
Debecsan wax laga beddelay 4mm 3mm Asphalt Polyester Mat ...